ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဒု-၀န်ကြီးချုပ်ပြောကြားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍”
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက စင်္ကာပူ အစိုးရ ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံပဲ။ ဒီ ကိစ္စ မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ တခြား ဘလော့ဂါတွေ သူတို့ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ နေ့စဉ် အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ရေးသားကြတဲ့နေရာမှာလဲ မတတ်သာလို့ သာနေနေရတာ မင်းတို့ နိုင်ငံလေးလောက် နဲ့ကွာ လို့ အတွေးတွေ ရှိနေလို့ ထင်တယ်။ ထိုင်းအစိုးရ ကိုတောင် ဒီလို သွား မလုပ်ရဲလောက်ဘူး၊ ဘာလို့ မြန်မာတွေ စင်္ကာပူအစိုးရကို အထင်မကြီးတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေရတာလဲ။ မြန်မာတွေ မသိစိတ်ထဲမှာ ဘာကို အားကိုးနေလို့လဲ မသိဘူး။ စိတ်ထဲ ထင်တာလေးတွေ လာရေးတာ။
Speaker corner မှာတရားဝင် ဆန္ဒပြခွင်. ဆိုတာဖြစ်လာတာ......
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေ ကိုကျေးဇူးတင်ဘို.လုံးဝကေါင်းတယ်။
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘယ်ဒေသရောက်ရောက် မျိူးချစ်မြန်မာများ ( နအဖ ဘောမများ မပါဝင်ပါ ) ဟာ အမှန်တရားဘက်က ရဲ ရဲ ရင်.ရင်. တိုက်ပွဲ ၀င်သွားမယ်ဆိုတာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။။။
စ လုံးအစိုးရ ဒီလိုလုပ်တာဟာ....
အင်း..ဒီလိုတောင် တရားဝင် ထုတ်ပြော တိုက်ခိုက်လာပြီဆိုတော့ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးပါပဲလား။ ကိုယ့်လူတွေဆီက လာသင်တန်း တက်သွားပုံရတယ်။
ဆောင်းပါးရေးတဲ့သူရော၊ ဘာသာပြန်တဲ့ ကိုပေါကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗျို့ ကို Anonymous ကြီး,
မြန်မာဆို တာဘယ်လိုဆိုတာ မသိတာ ခင်ဗျားကမြန်မာမဟုတ်လို့လား ဒါမှမဟုတ်..မျိုးမစစ်လို့လား....မြန်မာဆိုတာဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ရွေ့လို့ရတယ်ဗျ